Posted by Tranquillus | Nov 16, 2020 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Warqad tusaale ah si aad ugu soo sheegto hal ama in kabadan khaladaad kujira warqadaada lacag bixinta. Dukumeenti aad kuu anfici doona. Dhibaatada noocan ah waa mid aad uga badan inta aad qiyaasi karto.
Khaladaad dhowr ah ayaa saameyn ku yeelan kara qaddarka mushaharkaaga bishii. Iyo qaab kasta oo aad ku shaqeyso. Waa iska caadi xaaladahan. Si aad uga dooddo xaashida mushaharka oo aad uga warbixiso wixii cillado ah loo-shaqeeyahaaga boostada ama email. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah talooyin kugu hagaya.
Maxay yihiin khaladaadka ugu badan ee mushahar bixinta?
Xusuusin ahaan, diiwaanka mushaharku waa qayb aan marnaba la iska indhatiri karin. Waxaa si adag lagugula talinayaa inaad keydiso diiwaankaaga mushaarka nolosha. Haddii loo-shaqeeyahaagu ku siin waayo, dalbo. Ganaax dhan € 450 halkii dii mushaar ee maqnaa waxay u egtahay inuu ku dhici doono loo shaqeeyahaaga. Intaas waxaa sii dheer, waxaa jira magdhawyo kiisaska aad dhib ku noqon lahayd. Waa kuwan qaar ka mid ah khaladaadka caadiga ah ee ka muuqan kara diiwaankaaga lacag-bixinta.
Kordhinta waqtiga dheeraadka ah lama xisaabiyo
Waqtiga dheeraadka ah waa in la kordhiyaa. Haddii kale, loo shaqeeyaha waxaa ku waajib ah inuu ku siiyo magdhow.
Khaladaadka heshiiska wadajirka ah
Codsiga heshiiska wadajirka ah ee aan u dhigmin howlahaaga ugu muhiimsan. Laakiin qof kasta oo loo adeegsado saldhig ahaan xisaabinta warqaddaada mushaharku wuxuu yeelan karaa saameyn taban wuxuuna hoos u dhigi karaa lacagahaaga. Tani waxay khusaysaa gaar ahaan fasax mushahar leh, fasax jirro, muddada tijaabada. Dhanka kale, haddii heshiiska si qalad ah loo adeegsaday uu adiga ku habboon yahay, loo-shaqeeyahaagu xaq uma laha inuu ku weydiiyo dib u bixinta lacag-bixin xad-dhaaf ah
Waraaqdaada mushaharku waa inay ku xusaan taariikhda shaqaalayntaada. Tani waa waxa go'aaminaya dhererkaaga adeegga waxaana loo adeegsadaa ugu horreyn si loo xisaabiyo magdhowgaaga haddii ay dhacdo cayrin. Intaas waxaa sii dheer, qalad ku saabsan mudnaantaada ayaa kaa qaadi kara faa'iidooyin dhowr ah, RTT, ciidaha, xuquuqda tababarka, gunooyin kala duwan.
Maxay yihiin habraacyada la raacayo haddii ay cilad dhacdo warqadda lacag bixinta
Sida caadiga ah, sida ku xusan Qodobka - L3245-1 ee Xeerka Shaqaalaha, shaqaaluhu wuxuu ku dalban karaa lacagaha la xiriira mushaarkiisa 3 sano gudahood, laga bilaabo taariikhda uu ka warqabo khaladaadka ku jira warqadiisa mushaarka. Nidaamkani wuu sii socon karaa xitaa haddii ay dhacdo cayrin.
Ilaa iyo inta loo shaqeeyuhu ka walwalsan yahay, sida ugu dhakhsaha badan ee dambe u arko khalad bixinta, waa inuu falceliyaa sida ugu dhakhsaha badan. Iyadoo si dhakhso leh loola taliyo shaqaalaha si loogu heshiiyo xalka nabadeed. Xaaladaha badankood, qaladka waxaa lagu xaliyaa warqadda mushaharka ee soo socota.
Dhinaca kale, xaaladaha haddii warqadda mushaharku ay u hiiliso qofka shaqaalaha ah, qaladku waa mas'uuliyadda loo shaqeeyaha, laakiin waa shardi keliya inuu khuseeyo heshiiska wadajirka ah. Haddii heshiiska wadajirka uusan quseynin, shaqaaluhu wuxuu ku qasban yahay inuu dib u bixiyo lacagta dheeraadka ah xitaa haddii uusan ku sii jirin shirkadda. Wax ka beddel ayaa lagu samayn karaa warqadda mushaharka ee soo socota, haddii ay weli ka mid tahay xoogga shaqaalaha.
Tusaalooyinka waraaqaha si aad ugu soo sheegto khalad ku jira warqadda mushaarka
Labadan warqadood oo muunad ah ayaa kaa caawin doona inaad tilmaamto qalad ku soo galay warqadaada lacag bixinta.
READ Sideed uga fogaan kartaa khaladaadka higaada shaqada?
Warqad dacwad ah haddii ay jirto khasaaro
Ujeeddo: Sheegasho khalad ku jira warqadda mushaharka
Aniga oo ka shaqeynayey shirkadeena tan iyo [maalintii aan soo galay shirkadda] sidii [booska hadda], waxaan la socdaa rasiidkayga mushaharkeyga inta lagu jiro bisha [bisha].
Ka dib markaan si taxaddar leh u akhriyey dhammaan faahfaahinta, waxaan ogaaday khaladaad qaar ka mid ah oo ku saabsan xisaabinta magdhawgayga.
Runtii, waxaan ogaaday in [si faahfaahsan loo fahmay khaladaadka la hayo sida kororka saacadlaha ah oo aan la tixgelin, lacagta aan lagu darin, khaladaadka xisaabinta ee ku darsiga (yada), laga jaro maalmaha maqnaanshaha…].
Ka dib wareysi kooban oo aan la yeeshay waaxda xisaabaadka, waxay ii xaqiijiyeen in tan lagu xallin doono bixinta xigta. Si kastaba ha noqotee, waxaan jeclaan lahaa inaan sharciyeeyo xaalada sida ugu dhaqsaha badan sida ku xusan qodobka R3243-1 sida ku xusan Xeerka Shaqaalaha.
Sidaa darteed waan ku mahadnaqayaa haddii aad sameyn lahayd waxa lagama maarmaanka u ah xallinta xaaladda oo aad i siiso farqiga u dhexeeya mushaharka ay tahay inaan qaato sida ugu dhakhsaha badan. Sidoo kale, waad ku mahadsantahay inaad ii soo saartay warqad mushahar cusub.
Inta laga sugayo natiijo wanaagsan, fadlan aqbal, Mudane, muujinta tixgelinteyda ugu sareysa.
Warqad codsi sixitaan ah haddii ay dhacdo lacag bixin dheeraad ah
Ujeeddo: Codsi sixitaan khalad ah oo ku yaal warqadda mushaharka
Shaqaale ka tirsan shirkadeena tan iyo [taariikhda shaqaalaynta] oo fadhiya jagada [jagada], waxaan ku qaataa mushaharkeyga [maalinta lacag bixinta billaha ah] qaddar dhan [qaddarka mushaharka billaha ah].
Markaan helayo warqaddayda mushaharka ee bisha [bisha ay khusayso qaladka mushaharka], waxaan ku ogaysiinayaa inaan ogaaday khaladaad xisaabeed qaarkood oo laxiriira mushaharkayga, gaar ahaan [faahfaahinta khaladaadka (yada) ( s)]. Intaas markaan idhi, waxaan helay mushahar aad uga badan kan aad bil kasta i siiso.
Sidaas darteed waxaan kaa codsanayaa inaad ku saxdo farqigayga ku yaal diiwaanka mushaharkayga.
Fadlan aqbal, Marwo, muujinta dareenkayga sharafta leh.
Soo deji "warqad dacwo ah haddii ay dhacdo niyad-jab"	warqad-cabashada-in-case-of-defavor.docx - La soo dejiyay 614 jeer - 16 KB
Soo deji "warqad codsanaysa sixid haddii ay dhacdo lacag bixin dheeraad ah"	warqad-codsi-is-habeyn-in-case-of-too-percu.docx - La soo dejiyay 570 jeer - 15 KB
Template warqad si aad u soo sheegto khalad ku jira diiwaankaaga mushaharka Febraayo 13, 2022Tranquillus
horeMaamul isgaarsiinta suuq geynta internetka ee isku dhafan
socdaShaqada taleefanka: barbaarinta halkii laga cunaqabateyn lahaa loo shaqeeyeyaasha dib-u-dhiska ah